Kuhanyisa Medical Chigadzirwa Kuvandudza / Createproto - Createproto Tech Co, Ltd.
Kuwedzeredza Medical Chigadzirwa Innovation
Iko kukurumidza uye kubudirira kupedzisa kwemakiriniki miedzo chinhu chinodiwa pakubudirira kwekutengeserana kwechigadzirwa chechiremba. Chigadzirwa chekurapa prototyping yakakosha kune yako yekurapa chigadzirwa dhizaini uye kuvandudza maitiro. Unogona kuvapinza murabhoritari kana makiriniki miedzo uye pakupedzisira kumusika nekukurumidza.
CreateProto inopa yakazara yakazara yekukurumidza prototyping uye yekugadzira mhinduro kune ekurapa indasitiri. Kubva pamaoko akabata zvishandiso kusvika kumahombekombe ekurapa, tinopa huwandu hwakazara hwekurapa kuchinjisa masevhisi kubva kune yemhando modhi yekusimbisa uye inoshanda prototype kuyedza kune yakaderera vhoriyamu kugadzirwa inomhanya pamutengo unoshanda uye unokurumidza kuendesa.
Imwe yemakambani anotungamira ekurapa ekurapa epasirese anotendeukira kuGadziraProto kuti ivhure mabhenefiti eiyo modhi yekugadzira yedhijitari. Kubva pamidziyo yakabatana kusvika kuhukuru hwevanhu zvigadzirwa zvehutano, kugadzira kwedhijitari kunowedzera kusimudzira uye kuunza musika kuburikidza nekukurumidza prototyping, zambuko zvishandiso, uye yakaderera-vhoriyamu kugadzirwa.
Nei Makambani Ekurapa Ekuvandudza Makambani Anoshandisa CreateProto?
Inopindirana Dhizaini Kuongorora
Ita zvakakosha kugadzirisa dhizaini iyo inochengetedza yekuvandudza nguva uye mutengo neyakagadzirwa yeiyo manufacturability (DFM) mhinduro pane yega quote.
Tora yakaderera-vhoriyamu yekugadzira zvikamu mukati nekukurumidza sezuva rimwe chete kuti ugadzirise yako yekupa cheni kamwe uye zvisati zvapera uye mushure zvigadzirwa zvatanga kumusika.
Bridge Tooling Usati Wagadzira
Regedzera yakachipa bhiriji turu yekushandisa dhizaini uye musika kusimbiswa pamberi pekudyara mari muzvishandiso.
Sarudza kubva kumusoro-tembiricha mapurasitiki, ekurapa-giredhi silicone rabha, uye 3D-yakadhindwa micro-resolution uye microfluidic zvikamu, pakati pemazana emamwe epurasitiki, simbi, uye elastomeric zvinhu.
Akawanda ekugadzira matekinoroji pamasevhisi mana anoreva kuti zvikamu zvako zvakapetwa nemidziyo chaiyo uye maitiro zvisinei nebasa rako.
Gadzira prototypes mune ekugadzira-giredhi zvinhu zvekushanda uye kwekuyedza kuyedza, kana 3D anodhinda mamodheru uye nhengo masikeni kuti utarise pamberi pekurapa maitiro.
Medical jekiseni richigadzirisa
Rapid jekiseni Kuumbwa kunopa sarudzo iri nani kune avo vekurapa michina yekugadzira inoda yakaderera vhoriyamu yakaumbwa zvikamu. Ichasangana nezvido zvako zvekuongorora kwekugadzira zvinhu, kuyedza kweinjiniya, kuongororwa kwekiriniki, kuratidzira kwevatengi kana kugadzirira kwekugadzira muzvikamu zvekupedzisira zvekurapa uye hutano chigadzirwa chigadzirwa. Panguva imwecheteyo, ichakwanisa kubvarura musiyano uripo pakati pekuenzanisira uye kugadzirwa, uye rega chero nyaya dziwanikwe nekugadziriswa zvakanaka zvisati zvaendeswa mukugadzira.
Kumhanyisa kuvandudzwa kweDaily Class I uye II zvishandiso, kana izvo zvisingaisirwe zvinhu, neyedu yekurapa jekiseni kuumbwa kugona, uko kunosanganisira simbi yekushandisa, makamuri akachena, uye ISO 13485 yemhando certification.
3D Kudhinda Kunotyaira Kugadziridza mune Yekurapa Indasitiri
Iine 3D kudhinda, kukurumidza prototyping uye yekuwedzera yekugadzira tekinoroji inoenderera nekukwakuka uye miganho, ichigadzira zvisingaite mikana uye zvechokwadi kune izvo zvekurapa indasitiri. Kudhinda kwe3D inzira yekuwedzera yekugadzika iyo inobvumira izvo zvimwe zvikamu kuti zvigadziriswe nekukurumidza. Iyi yekukurumidza prototyping nzira inobvumidza inokurumidza uye isingadhuri iterations yedhijitari yeanobudirira kugadzirisa. Iyo yakakura mukana we 3D kudhinda inopa iri chaiyo fomu uye inokodzera kuyedza sezvo iyo yekuvaka nzira yekuwedzera tekinoroji inogona kunyatso kuburitsa fomu uye saizi yechinodiwa chikamu, ichiita kuti ive inobatsira kwazvo pakuongorora kwekutanga kwezvikamu zvitsva zvekurapa.
CreateProto inopa dzakasiyana siyana dze3D kudhinda masevhisi anosanganisira Stereolithography (SLA) uye Selective Laser Sintering (SLS), nzira dzakanaka dzekukasira yako chigadzirwa kuvandudza maitiro. Kubva pane dhizaini yeCAD kune chikamu chemuviri mumaoko ako uye pakupedzisira pamberi peboka rako, iri kukurumidza kupfuura nakare kose. Tine timu yakazara yeinjiniya dzakazvipira uye mamaneja eprojekti ayo achashanda newe kuongorora maumbirwo, kutaridzika uye mashandiro, kubatsira vangangoita mari uye vatengi kuona zviri nani chigadzirwa chiripo kutungamira kumwe kudyara muchigadzirwa chisati chaenda kumusika.
CNC Precision Machining yeMedical Devices uye Zvikamu
Pamwe hapana imwe tekinoroji inogona kutamba rakakosha basa mune yakakwira-chaiyo, yepamusoro-shiviriro yekugadzira seCCC machining. Createproto inyanzvi muCCC prototype machining sevhisi muindasitiri yezvokurapa, ichitarisa pane chaiyo yakajeka yekuona dhizaini mamodheru uye yakazara-inoshanda enjiniya prototypes. Kubva ku-3-axis CNC michina yezvishoma zvokurapa zvikamu kana mapfupi anomhanya, kune inochinja-mashanu-axis masisitimu eakarongeka machined ekurapa zvikamu, izvi zvinogadzirisa kugona zvinogonesa zvikwata kukurumidza kumhanyisa epurasitiki nesimbi machining mune inoshanda uye inodhura.
Usati watamira kune 3D kudhinda mune yekurapa, pazasi pane zvakanakira CNC machining, uye pazvinonyanya kubatsira:
Mhando dzakasiyana dzesarudzo yezvinhu, kusanganisira yekugadzira-giredhi mapurasitiki uye akasiyana simbi.
Yakanyatsojeka, inodzokororwa, uye yakanakisa pamusoro pekupedzisa uye ruzivo
Kutsanya kutendeuka, CNC machining inogona kumhanya ichienderera kwemaawa makumi maviri nemana kana setup yapera.
Tsika dzezvinhu zvinogadzira ekurapa machining masevhisi, anokwenenzverwa mavhoriyamu kubva kune imwe kusvika 100,000.
Urethane Kukanda kweMadiki-masimbi Innovation muMedical Products
Mikana mizhinji uye zvinoshandiswa zvinogadzira polyurethane kukanda kuwedzera kunogombedzera kune indasitiri yekurapa. Unogona kushandisa urethane kukanda kwekutanga chigadzirwa kuburitsa usati wajekesa jekiseni uye maturu ekutsvagisa musika uye mhinduro yevatengi, pamwe nekutangisa kwekutanga kwezvigadzirwa zvekurapa. Kune misika uko kudiki-kudiki kwehunyanzvi kuri kweyakajairwa uye hupenyu hwechigadzirwa ipfupi, silicone kuumba kukanda urethane zvakare inobvumidza vagadziri kuvandudza magadzirirwo avo nekumhanyisa nhanho vasingatore mari yemashandisirwo akaomarara.
GadziraProto's nyanzvi timu inopa yakanakisa yekutsiva yekurasa sevhisi yezvokurapa zvigadzirwa epurasitiki prototypes, uye inokubatsira iwe kurova chaiyo chiyero pakati yepamusoro-soro, magumo-ekushandisa zvikamu uye yekugadzira lead-nguva. Izvi zvinoshandura kuita nguva uye mutengo wekuponesa vatengi vanotsvaga kukwikwidza kumucheto kumberi mune fomu kukwana uye kushanda kuyedza, pre-kushambadzira, kana kunyangwe senge yakaderera-vhoriyamu yekugadzira imwe nzira.
Ndezvipi Zvishandiso Zvinoshanda Zvakanakisa kune Zvekurapa Zvishandiso?
Yakakwirira-temp maPurasitiki. PEEK uye PEI (Ultem) inopa yakanyanya-tembiricha kuramba, inokambaira kuramba, uye inokodzera kune maficha anoda sterilization.
Chiremba-giredhi Silicone Rubber.Dow Corning's QP1-250 ine yakanakisa kupisa, kwemakemikari, uye kwemagetsi kuramba. Izvo zvakare bio-inoenderana saka inogona kushandiswa mune zvinoshandiswa zvinoda kusangana kweganda.
Carbon RPU uye FPU. Carbon DLS inoshandisa akaomarara uye semi-akaomarara polyurethane zvinhu kuvaka anoshanda zvikamu zvakanakira kunonoka-danho prototyping kana magumo-kushandisa zvishandiso.
Microfluidics. Mvura yakadiridzwa (ABS-senge) uye Accura 60 (PC-senge) zvinhu zvakajeka zvinogona kushandiswa kune microfluidic zvikamu uye zvidimbu zvakajeka semalensi uye dzimba.
Kurapa Alloys.Pakati pemashini uye 3D-yakadhindwa simbi pamwe neshiti simbi, pane zvinopfuura makumi maviri simbi zvinhu zvingasarudzwa zviripo zvezvinhu zvekurapa, zvishandiso, uye zvimwe zvinoshandiswa. Simbi senge titanium uye Inconel vane hunhu senge tembiricha kuramba apo akasiyana simbi simbi zvinhu zvinounza ngura kuramba uye simba.
Isu tine akati wandei kugona mukati memasevhisi edu uye maitiro anoitirwa vatengi uye makomputa emagetsi maindasitiri. Mamwe mashoma ekushandisa anosanganisira:
Kuvhara uye dzimba
"Yabikwa mumadhizaini edu uye maitiro edu eR & D izvozvi ... Zviri nyore kwandiri kuti ndigadzirire fomu yechimwe chikamu chechigadzirwa chekurapa (kubva kuGadziraProto) pane kwandiri kuti ndibhadhare chikwereti changu online."
- Tom, Smith, Mutungamiriri weDesign
Cnc Kuchengetedza, Kukurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Rapid Prototyping, Kurumidza Prototyping,